काठमाडौं, १५ साउन । अभिनेत्री केकी अधिकारी र रीमा विश्वकर्मा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका मामिलामा सधैँ अगाडि थिए। त्यसका लागि उनीहरूले आफ्ना प्रशंसक र सिंगो समाजकै प्रशंसा पनि पाउँथे। नारीका लागि नारी सेलिब्रेटीको बुलन्द आवाज, समतामूलक समाजका लागि राम्रै मानिन्छ।
एक वर्ष अगाडिको निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्या होस् या केही दिनअघिको छवि–शिल्पा प्रकरण। केकी र रीमा दुबैले खुलेर विरोध गरे, पीडित महिलाको पक्षमा आवाज राखे। दुबै जना फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्। उनीहरूका फेसबुक/ट्वीटर पेज महिला हिंसाको विरोध र अधिकारको पक्षमा भरिएको छ। तर अहिले आएर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा सेयरले उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ।
गीतको बोल छ, ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे…’
निकट साथीको गीत भएपछि केकीले सेयर नगर्ने कुरै भएन। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र व्यक्तिगत पेजमा गीतको भिडिओ सेयर गरिन्। गीतको सफलताको लागि आर्जनलाई शुभकामना पनि दिइन्।
सो गीतमा मोडल बनेकी छन् केकीकै मिल्ने साथी, रीमा विश्वकर्मा।
केकीले गीतको भिडिओ सेयरमात्र गरेकी छैनन्, उनले टिकटक समेत बनाएकी छन्। पछिल्लो समय टिकटक गीत प्रचारको प्रभावशाली माध्यम बन्दै गएको छ। यो गीतका शब्दहरूले महिलालाई होच्याउने, गिज्याउने र उनीहरूको वस्तुकरण गरेका छन्। यौनिक दृष्टिकोणबाट नारीलाई व्याख्या गरिएको छ, त्यो पनि एकदमै भद्दा शैलीमा। यस्ता गीत सेयर गरेर केकी र रिमाले आफ्नो वास्तविक सोच उजागर गरेको भन्दै अहिले आलोचना भैरहेको छ।
एकातिर महिला अधिकारको पक्षमा र महिला हिंसाको विरोधमा बोल्दै लेख्दै हिँड्ने अनि अर्कोतर्फ महिलालाई होच्याउने, गिज्याउने गीतको समर्थन र प्रचार गर्दै हिँड्ने? उनीहरूको यो शैली र गीतले सामाजिक सञ्जालमा केही दिनयता आलोचना खेपिरहेको छ। कतिले यसलाई भद्दा र छाडा भनेका छन्। यसले महिलाको अपमान गरेको कुराहरू सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूले गरेका छन्।
उदाहरणका लागि युट्यूबको कमेन्टमा प्रियंका भुसाल नामकी एक प्रयोगकर्ताले कस्तो खालको गीत हो यो? भनेर प्रश्न गरेकी छन्। ‘के हो यस्तो गीत, घाँटीभन्दा तल… एकदमै खत्तम शब्द। यसले तिम्रो केटीहरूप्रतिको धारणा देखाउँछ’, उनले लेखेकी छन्।
‘योभन्दा नराम्रो गीत सुनेको पनि थिइनँ, फेद न टुप्पोको गीत। घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे अरे’
अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। ‘आजसम्म नदेखेको र नसुनेको तुच्छ मानसिकता भएको गीत लेखक। अचम्ममा छु रीमाले कसरी यस्तो गीत खेलिन?’, शर्मिला गुरूङले रीमालाई प्रश्न सोधेकी छिन्।
गायिका आस्था राउतले यस गीतको चर्को विरोध गरेकी छन्। ‘के भनेको होला त्यस्तो घाँटीभन्दा तल राम्री नै छे रे। फेरि छोरी मान्छेलाई नै नराम्रो बनाएको यो के तालको गीत निकालेको होला राम राम। के यो हिट हुने निन्जा टेक्निक हो? केटीको त घाँटीभन्दा तलु गायिका राउतले लेखेकी छन्, ‘यो लेख्ने र गाउनेको त तलदेखि माथिसम्म केही पनि गतिलो रहेनछ, सबैभन्दा खत्तम त सोच नै हो। सोच गतिलो भएको भए छोरी मान्छेलाई हेर्ने एङ्गल गतिलो भको भए यस्तो घटिया गीत हेर्न र सुन्न पर्थेन होला। यो खत्तम छ। केटीलाई यौनको साधन बनाउनेले नै यस्तो गीत निकाल्छ। यो गीत देखेर मलाई नेपाली संगीत कता जाँदैछ भनेर सारै चिन्ता लाग्यो…छि छि छि।’
यो चर्को आलोचनाबारे केकी र रीमाको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।